I-Gem efihliweyo-BRAND entsha ye-Apt. ENKULU indawo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIvan I Željka
Igumbi elitsha elihle elikwi-CITY CENTRE ngaphantsi kwe-10 min umgama wokuhamba ukusuka kwisikwere esikhulu kunye nesikhululo sikaloliwe. Ibekwe kwiyadi enoxolo engasemva kwisitrato esikhulu ukuze wonwabele ubusuku obuzolileyo. Kukho igumbi elinye lokulala elinobukhulu bendlovukazi, igumbi lokuhlala elineTV + NETFLIX kunye nokutsala isofa (ubukhulu bokumkanikazi), igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye nokuhamba okubanzi kwishawari eyahlukileyo. Yonke ifanitshala kunye nezixhobo zombane zintsha kraca. Iti & ikofu YAMAHHALA, iitawuli ZAMAHHALA. Indawo yokupaka yi-400 m kude kwaye yi-€1.5 imini yonke.
Isakhiwo asikho kwindlela enkulu kwaye indlu inendlela yokuphuma ngokuthe ngqo kwigadi yabucala ngoko ilungile ukuba ufuna ukulala kamnandi ebusuku kwaye usesentliziyweni yeZagreb. Kuthatha kuphela amanyathelo ali-10 phezulu nasezantsi ukuya apho ngoko akukho mfuneko ye-elevator kwaye sinokuhlala sikunceda ngemithwalo yakho.
4.95 · Izimvo eziyi-264
Sizibhloko ezi-2 ukusuka eZagreb park Zrinjevac kunye nemizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka kwisikwere esikhulu. Yonke indawo izele ziivenkile zekofu, iivenkile zokutyela, iibhaka, iivenkile ezintle, ngokusisiseko yonke into onokuyidinga ikhona. Awudingi moto kuba usentliziyweni yeZagreb. IZagreb yindawo ekhuselekileyo kwaye le ndawo ikhuseleke ngokupheleleyo ke akufuneki ukhathazeke ngaloo nto.
Umbuki zindwendwe ngu- Ivan I Željka
Sisibini esitshatileyo esihambe kakhulu kwaye yiyo loo nto singabamkeli abakhethekileyo. Asikubulisi nje ngokobuqu kodwa ukuba asisebenzi singakuthatha nakwisikhululo seenqwelomoya sikaloliwe/sesikhululo sebhasi. Siza kuphendula yonke imibuzo yakho kwaye sikunike iingcebiso malunga nento omawuyenze/uyibone ngelixa uhlala eZagreb.
Sisibini esitshatileyo esihambe kakhulu kwaye yiyo loo nto singabamkeli abakhethekileyo. Asikubulisi nje ngokobuqu kodwa ukuba asisebenzi singakuthatha nakwisikhululo seenqwelomoya…
UIvan I Željka yi-Superhost